Combat Boots ကို စတိုင်ကျကျနဲ့ ခေတ်မှီအောင် ဘယ်လိုဝတ်ဆင်မလဲ? - Lifestyle Myanmar
Home Fashion Combat Boots ကို စတိုင်ကျကျနဲ့ ခေတ်မှီအောင် ဘယ်လိုဝတ်ဆင်မလဲ?
Combat Boots ကို စတိုင်ကျကျနဲ့ ခေတ်မှီအောင် ဘယ်လိုဝတ်ဆင်မလဲ?
Combat ဘွတ်ဖိနပ်တွေဟာ ၁၉၉၀နှစ်လယ်ပိုင်းလောက်က အရမ်းပေါ်ပြူလာဖြစ်ခဲ့ပေမယ့်လည်း ဒီဖိနပ်တွေဟာ ယနေ့တိုင် အရမ်းခေတ်မှီနေဆဲပါ။ ဒီဘွတ်ဖိနပ်တွေကို ဖန်စီအဝတ်အစားတွေနဲ့ တွဲဖက်နိုင်သလို casual ဝတ်စုံတွေနဲ့လည်း တွဲဖက်နိုင်ပါတယ်။ ထူးထူးခြားခြားနဲ့ စတိုင်ကျပြီး classy ဖြစ်မယ့်ဒီဇိုင်းကို ဖန်တီးဖို့ ဒီဘွတ်ဖိနပ်တွေကို အလွယ်တကူ သုံးနိုင်ပါတယ်။
၁။ ခေတ်မီဆန်းသစ်တဲ့ Look ကိုဖန်တီးဖို့ မ်ိန်းကလေးဆန်ဆန် ဂါဝန်ကို ရွေးချယ်ပါ
ရိုးရှင်းပေမယ့် solid color ဂါဝန်တိုတစ်ထည်နဲ့ combat boots တစ်စုံက ခေတ်မှီတဲ့ ဝတ်စုံတစ်စုံ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီထက်ပိုပြီး လွတ်လပ်မှုဒီဇိုင်းကို ဖန်တီးချင်ရင်တော့ ပန်းပွင့်လေးသေးသေးလေးတွေ၊ အစက်အပြောက်သေးသေးလေးတွေပါတဲ့ ဂါဝန်ရှည်တစ်ထည်ကို ရွေးချယ်ပါ။ ရောင်စုံဂါဝန်တစ်ထည်ဆိုရင်တော့ အနက် သို့မဟုတ် မီးခိုးရောင် combat boots ကိုရွေးချယ်ပါ။
၂။ ဘလောက်အင်္ကျီကောင်းကောင်းတစ်ထည်နှင့်အတူ short boots တစ်စုံ
အဖြူ၊ ပန်းရောင်ဖျော့ဖျော့ သို့မဟုတ် အဝါရောင်ဖျော့ဖျော့ကဲ့သို့ အရောင်ဖျော့ဖျော့လေးမှာ flowy ဘလောက်တစ်ထည်ကို ရွေးချယ်ပါ။ ဇာတွေ၊ အတွန့်အဖတ်တွေကဲ့သို့ မိန်းကလေးဆန်ဆန် အသေးစိတ်အလှဆင်ထားတဲ့ ရှပ်တစ်ထည်ကို ရွေးချယ်ပါ။ ဘွတ်ဖိနပ်နဲ့ လိုက်ဖက်အောင် စကတ်အတို သို့မဟုတ် cropped pants လေးတွေကို ရွေးချယ်ပါ။
၃။ မိန်းကလေးဆန်ဆန် Look အတွက် သင့်ရဲ့ဘွတ်ဖိနပ်ကို စကတ်တစ်ထည်ဖြင့် ဝတ်ဆင်ပါ
အနက်ရောင်၊ မီးခိုးရောင် pencil skirt လေးတွေက သင့်ရဲ့ဝတ်စုံကို ပရောင်ဖက်ရှင်နယ်အသွင်ကို ဖန်တီးပေးပါလိမ့်မယ်။အင်္ကျီကို ပိုပြီး စနစ်ကျကျ ဝတ်မယ်ဆိုရင်တော့ အထပ်အတွန့်အဖက်လေးတွေပါတဲ့ ခပ်ပွပွစကတ်တစ်ထည်ကို ရွေးချယ်လို့ရပါတယ်။
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မကျတဲ့ အသွင်ကို ဖန်တီးပေးနိုင်တာကြောင့် ဘွတ်ဖိနပ်ကို maxi စကတ်နဲ့ တွဲဝတ်တာရှောင်ပါ။
၄။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် Look တစ်ခုအတွက် ankle-height boots နှင့် သိုးမွှေးရင်စေ့အင်္ကျီကို ရွေးချယ်ပါ
ပိုမိုခေတ်မှီတဲ့ Look ကိုဖန်တီးဖို့အတွက် ရှပ်အင်္ကျီအပေါ်ကနေ ရင့်စေ့ဆွယ်တာအကျီင်္လေး ထပ်ဝတ်ပါ။ မိန်းကလေးပိုဆန်ချင်ရင်တော့ pencil skirt တစ်ထည်ကို ရိုးရိုးဘလောက်တစ်ထည်နှင့်အတူ ဇာရင်စေ့အကျီင်္လေးထပ်ဝတ်နိုင်ပါတယ်။ သိုးမွှေးရင်စေ့အင်္ကျီတွေက အေးမြတဲ့ ဆောင်းရာသီမှာ နွေးထွေးစေပြီး ဖက်ရှင်ကျတဲ့ အင်္ကျီတစ်ထည်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
၅။ cropped pants နဲ့တွဲဝတ်မယ်ဆိုရင် shorter boots လေးကို ရွေးပါ
စတိုင်ကျတဲ့ ဝတ်စုံကိုဖန်တီးဖို့ အနက်ရောင်၊ မီးခိုးရောင် ၊အညိုရောင်၊ မိုးပြာရောင်ကဲ့သို့ အရောင်ရင့်ရင့် ဘောင်းဘီတွေကို ရွေးချယ်ပါ။ cropped jeans လို ခြေချင်းဝတ်အထက်မှာ ဆုံးတဲ့ ဘောင်းဘီအကျပ်လေးတွေ ဖြစ်ရပါမယ်။ ဘောင်းဘီက ဒီထက်ပိုရှည်ရင် ဘောင်းဘီနဲ့ ဖိနပ်အကြား အသားအရေကို နည်းနည်းပြဖို့ တစ်ခေါက် ခေါက်ပြီး ဝတ်ဆင်ပါ။
Combat Boots ကို စတိုငျကကြနြဲ့ ခတျေမှီအောငျ ဘယျလိုဝတျဆငျမလဲ?
Combat ဘှတျဖိနပျတှဟော ၁၉၉၀နှဈလယျပိုငျးလောကျက အရမျးပျေါပွူလာဖွဈခဲ့ပမေယျ့လညျး ဒီဖိနပျတှဟော ယနတေို့ငျ အရမျးခတျေမှီနဆေဲပါ။ ဒီဘှတျဖိနပျတှကေို ဖနျစီအဝတျအစားတှနေဲ့ တှဲဖကျနိုငျသလို casual ဝတျစုံတှနေဲ့လညျး တှဲဖကျနိုငျပါတယျ။ ထူးထူးခွားခွားနဲ့ စတိုငျကပြွီး classy ဖွဈမယျ့ဒီဇိုငျးကို ဖနျတီးဖို့ ဒီဘှတျဖိနပျတှကေို အလှယျတကူ သုံးနိုငျပါတယျ။
၁။ ခတျေမီဆနျးသဈတဲ့ Look ကိုဖနျတီးဖို့ မျိနျးကလေးဆနျဆနျ ဂါဝနျကို ရှေးခယျြပါ
ရိုးရှငျးပမေယျ့ solid color ဂါဝနျတိုတဈထညျနဲ့ combat boots တဈစုံက ခတျေမှီတဲ့ ဝတျစုံတဈစုံ ဖွဈပါတယျ။ ဒီထကျပိုပွီး လှတျလပျမှုဒီဇိုငျးကို ဖနျတီးခငျြရငျတော့ ပနျးပှငျ့လေးသေးသေးလေးတှေ၊ အစကျအပွောကျသေးသေးလေးတှပေါတဲ့ ဂါဝနျရှညျတဈထညျကို ရှေးခယျြပါ။ ရောငျစုံဂါဝနျတဈထညျဆိုရငျတော့ အနကျ သို့မဟုတျ မီးခိုးရောငျ combat boots ကိုရှေးခယျြပါ။
၂။ ဘလောကျအကငြ်ျီကောငျးကောငျးတဈထညျနှငျ့အတူ short boots တဈစုံ
အဖွူ၊ ပနျးရောငျဖြော့ဖြော့ သို့မဟုတျ အဝါရောငျဖြော့ဖြော့ကဲ့သို့ အရောငျဖြော့ဖြော့လေးမှာ flowy ဘလောကျတဈထညျကို ရှေးခယျြပါ။ ဇာတှေ၊ အတှနျ့အဖတျတှကေဲ့သို့ မိနျးကလေးဆနျဆနျ အသေးစိတျအလှဆငျထားတဲ့ ရှပျတဈထညျကို ရှေးခယျြပါ။ ဘှတျဖိနပျနဲ့ လိုကျဖကျအောငျ စကတျအတို သို့မဟုတျ cropped pants လေးတှကေို ရှေးခယျြပါ။
၃။ မိနျးကလေးဆနျဆနျ Look အတှကျ သငျ့ရဲ့ဘှတျဖိနပျကို စကတျတဈထညျဖွငျ့ ဝတျဆငျပါ
အနကျရောငျ၊ မီးခိုးရောငျ pencil skirt လေးတှကေ သငျ့ရဲ့ဝတျစုံကို ပရောငျဖကျရှငျနယျအသှငျကို ဖနျတီးပေးပါလိမျ့မယျ။အကငြ်ျီကို ပိုပွီး စနဈကကြ ဝတျမယျဆိုရငျတော့ အထပျအတှနျ့အဖကျလေးတှပေါတဲ့ ခပျပှပှစကတျတဈထညျကို ရှေးခယျြလို့ရပါတယျ။
ပရျောဖကျရှငျနယျမကတြဲ့ အသှငျကို ဖနျတီးပေးနိုငျတာကွောငျ့ ဘှတျဖိနပျကို maxi စကတျနဲ့ တှဲဝတျတာရှောငျပါ။
၄။ ပရျောဖကျရှငျနယျ Look တဈခုအတှကျ ankle-height boots နှငျ့ သိုးမှေးရငျစအေ့ကငြ်ျီကို ရှေးခယျြပါ
ပိုမိုခတျေမှီတဲ့ Look ကိုဖနျတီးဖို့အတှကျ ရှပျအင်ျကြီအပျေါကနေ ရငျ့စဆှေ့ယျတာအကြီင်ျလေး ထပျဝတျပါ။ မိနျးကလေးပိုဆနျခငျြရငျတော့ pencil skirt တဈထညျကို ရိုးရိုးဘလောကျတဈထညျနှငျ့အတူ ဇာရငျစအေ့ကြီင်ျလေးထပျဝတျနိုငျပါတယျ။ သိုးမှေးရငျစအေ့င်ျကြီတှကေ အေးမွတဲ့ ဆောငျးရာသီမှာ နှေးထှေေးစပွေီး ဖကျရှငျကတြဲ့ အင်ျကြီတဈထညျလညျး ဖွဈပါတယျ။
၅။ cropped pants နဲ့တှဲဝတျမယျဆိုရငျ shorter boots လေးကို ရှေးပါ
စတိုငျကတြဲ့ ဝတျစုံကိုဖနျတီးဖို့ အနကျရောငျ၊ မီးခိုးရောငျ ၊အညိုရောငျ၊ မိုးပွာရောငျကဲ့သို့ အရောငျရငျ့ရငျ့ ဘောငျးဘီတှကေို ရှေးခယျြပါ။ cropped jeans လို ခွခေငျြးဝတျအထကျမှာ ဆုံးတဲ့ ဘောငျးဘီအကပျြလေးတှေ ဖွဈရပါမယျ။ ဘောငျးဘီက ဒီထကျပိုရှညျရငျ ဘောငျးဘီနဲ့ ဖိနပျအကွား အသားအရကေို နညျးနညျးပွဖို့ တဈခေါကျ ခေါကျပွီး ဝတျဆငျပါ။
Previous articleပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဓာတ်ပုံဆရာတွေရဲ့ ကလေးအလှဓာတ်ပုံလေးကို ကြည့်ပြီး ကိုယ်တိုင်ရိုက်ကြည့်တဲ့အခါ
Next articleသက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားရင် မစားသင့်တဲ့ အစားအစာ (၇)မျိုး